Wararka – Page 9 – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya C/qaadir Cabdi Xaashi oo xilka la wareegaya.
Iskuulada iyo Degmooyinka ay ku yaalaan ee ardayda Gobolka Banaadir ay imtixaanka ku galayaan.
Iskuulada iyo Degmooyinka ay ku yaalaan ee ardayda Gobolka Banaadir ay imtixaanka ku galayaan, si aad faahfaahin u hesho lifaaqa hoose ku dhufo.
Liiska Xarumaha Imtixaanka Gobolka Banaadir
Deeq Waxbarasho oo Wasaaradda Waxbarashada ay kuu Hayso
Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Dowladda Federaalka Soomaaliya waxey kuu haysaa Deeq Waxbarasho oo Diploma laba sano ah, Qeybta Macalinimada (Faculty of Education) taasoo u gaar ah Gabdhaha Soomaaliyeed ee daneynaayo inay kamid noqdaan Barayaasha Dalka.
Deeqdaan Waxbarashada ee ay hayso Wasaaradda Waxey gaar u tahay Gabdhaha, waana Deeq Waxbarasho oo dhameystiran ama Full Schoolarship, tirade loo baahanyahay waa Kontan Gabdhood (5O)
Wasaaradda Waxbarashada waxey ugu tala gashay Deeqdaan inay uga faa iideeyaan Gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool Gobalka Banaadir.
Waxaa looga baahanyahay codsadaha Deeqdaan Waxbarashada inuu ka soo bixi kara Sharuudahaan:
Waa inay soo dhameysatay Dugsi Sare
Waa iney Diyaar u tahay iney kamid noqoto Macalimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Dalka.
Waa in diyaar ay u tahay in laga qaado Imtixaan Tijaaba ah.
Waa iney raali ka tahay marka ay dhameysato Waxbarashadeeda inay noqoto Macalin waxbarta Ubadka Dalkeena.
Qabashada Araajida Waxey bilaabaneysaa 1 bisha January 2015, waxeyna ku egtahay 3 bisha Janaury 2015-ka .
Waxaad ku soo hagaajin kartaa Araajidiina Xafiiska Wasaaradda Waxbarashada ee Magaalada Muqdishu, ama Eamilkaan: gotoschoolsomalia@gmail.com
Aqoon iswaydaarsi maanta uga Furmay Gudoonadda iyo Dalladaha Waxbarashada Dalka Xarunta Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta
(Muqdishu) Wasaaradda Waxbarashadda iyo Barbaarinta Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta uga furtay Xarunta Wasaarada Gudoonada Waxbarashada Dalka iyo Dalladaha gaarka loo leeyahay ee Waxbarashada Siminaar soconaya sadex maalmood kaas oo lagu baranya qaabka loo sameeya tira koobka, xog uruurin iyo sameynta Statistical.
Furitaanka Siminaarka ayaa waxaa ka hadlay Agaasimaha Guud ee wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Dowladda Fedraalka Soomaaliya waxa uuna yiri” Siminaarkaan waxa aad ku baraneysaan aad ayey muhiim u tahay marka laga eego dhinaca kormeerida Iskuulada iyo Goobaha Waxbarashada”.
Agaasimaha Wasaarada ayaa intaas ku daray in Nidaamka cusub ee xog u ruurinta lagu bilaabayo Gobalka Banaadir maadaama aan wali qarash loo helin Gobalada kale ee dalka, waxaana looga baahanyahay gobalka Banaadir oo sanadkii la soo dhaafay laga sameeyay kana la sameyn doono xog uruurin inay ka soo baxdo tira koob sax ah oo laga garan karo maxaa isbadalay sanadkaan iyo sanadkii la soo dhaafay, ma kordhayaan arada mise hoos ayey u dhaceen sidaasna waxaa lagu ogaan karaa inaan maanta Siminaarkaan ka faa’iidaysano ayuu yiri Agaasime Maxamed Cabdul qaadir Nuur
Agaasimaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in ka soo qeyb galayaasha aqoon iswaydaarsikaan ay yihiin kuwii tawabar siin lahaa kooxaha kale ee la rabo Mustaqbalka aqoon iswaydaarsi noocaan oo kala loo qabto islamarkaana loo baahanyahy inay si wanaagsan u fahmaan waxa laga bixinaayo aqoon iswaydaarsigaan
Xog uruurinta waxay muhiim u tahay qorshaynta, xog hadeysan jirin wax lama qorshayn karo, hadii aa tiraahdo sanadka soo socda Iskuul ayaan dhisaynaa maxaad ku dhisaysaa soo mahan inaad hesho xog, waa inaad haysaa xog uruursan oo kaa saacida qorsheyntaada, waxayna horay u tiri Soomaalida war helaa tala helaa oo micnaheedu yahay qofkii xog helo ayaa qorsheyn sameyn kara marka xogta waxay aas aas u tahay wax kasta oo loo baahanyahay in la qabto ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Agaasimaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Prof Maxamed Cabdulqaadir Nuur.
Dowladda Federalka Soomaaliya oo dhawaan ka furi doonto Muqdishu Dugsiya Sare oo bilaash ah
Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaal-ka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhawaan ka furi doonto Magaalada Muqdishu Goobo waxbarsho oo lacag la’aan ah gaar ahaan Dugsiya Sare oo ay ka faa’iidaysan doonaan Caruurta Soomaaliyeed oo aan fursad u helin inay helaan waxbarasho noocaan oo kala ah ku dhawaad 23 sano.
Saraakiisha Wasaaradda Waxbarsahada ayaa sheegay in haatan si hordhaca ay furi doonaan ilaa Sadex goobood oo waxbarsha ah oo heer dugsi sara ah, kuwaas oo qeyb ka ah Mashruuca Aada Dugsiyada (Go to School) oo ay wasaaradu kala kaashaneyso Hay’adaha Jaallka ay yihiin ee UNICEF Mercy Group, waxaana la filayaa in Dugiyadaas sare ay ka faa’iidaysan doonaan Caruurbadan oo Soomaaliyeed oo aan awoodin inay helaan waxbarasha sida ay Wasaaradu sheegtay.
Saraakiisha Wasaarada ayaa xusay inay dhawaan qaadan doonaan Macalimiin ka howlgala Goobahaas waxbarashada kuwaas oo tiradooda lagu sheegay inkabadan 30 barre.
Horay ayey Wasaarada Waxbarashada iyo Hay’adaha wada shaqeynta ay leeyihiin ee UNICEF iyo Marcy Group, uga fuliyeen Magaalada Muqdishu iyo qaar kamid ah Gobalada Dalka Soomaaliya Goobo Waxbarsho oo lacag la’aan ah oo badankooda ay ahaayeen Waxbarashada aas aasiga ah ee Hoose iyo dhexe kaas oo ay ka faa’iidaysteen Caruurbadan oo Soomaaliyeed.
Mashruuca Aada Dugsiyda (Go to School) ayaa looga gol leeyahay in kor loogu qaado aqoonta Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dan yarta aan awoodin inay caruurtooda ka bixiyaan Goobaha Waxbarashada ee Gaarka loo leeyahay maadaama Dalka Soomaaliya uu haatan ka soo kabanaayo Burburkii iyo Colaadihii ka jiray Dalka 23-kii sana ee ugu danbeeyay.
Waxaa xusid mudan in Wasaarada Waxbarshada ay haatan Qaar kamid ah Macalimiinta u wado Tawabaro (Capacity building) oo lagu doonaayo in kor loogu qaado aqoontooda iyadoo kala kaashaneyso Hay’adaha ay Jaalka yihiin.
Sikastaba Dowllada Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay kor ugu qaadi laheyd aqoonta Bulshada Soomaaliyeed.
Arday Deeq Waxbarasho ka Heshay Dalka Yemen oo Maanta Ka Ambabaxay Muqdisho.
Ardaydani maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeda dalka Yemen ayaa waxa ay nasiib u yeesheen in Jaamacado ay ka dhigtaan dalkaasi, ka dib markii imtixaanaad ay u galeen deeq waxbarsho oo ay Soomaaliya ka heshay Dowladda Yemen, iyadoo imtixaanaadkasi ardadan ay ka qaaday wasaaradda horumarinta adeega Bulshada Soomaaliyeed Agaasinkeeda Waxbarashada, Hiddaha & Tacliinta Sare. Agaasimaha Agaasinka Waxbarashada ee Wasaaradda Horumarinta Adeega Bulshada Prof: Maxamed C/qaadir Nuur oo warbaahinta kula hadlay Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan C/lle Cismaan (aadan Cadde) ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay ardayda maanta ka ambabaxday magaaladda Muqdisho ee ku sii jeeda dalka yeman si waxbarahadooda ay uga sii wataan dalka yemen. Agaasimaha ayaa waxaa uu sidoo kale sheegay in ardaydan ay dalka yemen ku soo dhaweeyn doonaan madaxda safaaradda soomaaliya ee dalka yeman,ardayda soomaaliyed ee wax ka barata dalkaasi kuwaasoo kaalin weyn ka qaadan doona sidii ardaydani loo kala geeyn lahaa gobollada ay ku yaalaan jaamacadaha ay wax ka baran doonaan. Dalka Yemen ayaa waxaa uu ka mid yahay dalalka Soomaaliya siiya deeqaha waxbarasho, iyadoo halkaasi ay ku nool yihiin boqolaal Soomaali ah oo si wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen dalkooda kuwaasoo ay ka mid yihiin ardayda soomaaliyeed oo wax ka barata dalkaasi. Xigasho: Radio Muqdisho